HERO OF MYANMAR: ၁၂ . ၈ . ၂၀၁၁ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
[13:36 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
သတင်းမီဒီယာတွေ လွှတ်တော် တက်ခွင့် ရတော့မည်
သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ကျင်းပဖို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး လုပ်တဲ့ သတင်းကို အစိုးရ သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီအစည်းအဝေးကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းက ဦးဆောင် လုပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးမှာ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများကို ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံခြား သတင်း ဌာနများက သတင်းထောက်များနဲ့ ပြည်တွင်း စာနယ်ဇင်းက သတင်းထောက်များ လာရောက် သတင်းရယူရေး အတွက် ဆောင်ရွက် ထားမှု အခြေအနေတွေကို တင်ပြခဲ့တယ် ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ လုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို လာတက်တဲ့ သတင်းထောက်တွေကိုလည်း ပြန်ကြားရေးက ကိုယ်ရေး ရာဇ၀င် ဖြည့်ဖို့ ၀င်ခွင့် ကပ်ပြားလုပ်ဖို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စများကို ရှင်းပြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌနဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဌများက ပထမဆုံး တာဝန်ယူ ကျင်းပတဲ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများဟာ ပထမအကြိမ် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ထက်တော့ ပိုပြီး လွတ်လပ် ပွင့်လင်းမယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။
တာဆန်းရေကာတာ ဆက်မလုပ်ရေး သဘောတူညီချက်ကြောင့် တရုတ်အင်ဂျင်နီယာ ပြန်လွှတ် click
- တာဆန်းရေကာတာအနီး ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် တရုတ်အင်ဂျင်နီယာများ ပြန်လွတ် click
- ဧရာဝတီ ပျက်စီးမှု ကာကွယ်ရန် ရွေးကောက်ပွဲဝင်တွေလည်း ပြောပြီ click
- မီဇိုရမ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦး လက်နက် ၃ လက်နှင့်အတူ ဖမ်းမိ click
- ကချင်တပ်နှင့် အပစ်ရပ်ရန် ဆွေးနွေးနေချိန် အစိုးရတပ် SSPP/SSA နှင့် တိုက်ပွဲပြင်းထန် click
- အပြောနဲ့အလုပ် ညီဖို့လိုတယ် click
- ၆၁ နှစ်​မြောက် ကရင်အာဇာနည်​နေ့ အခမ်း​အနား​ ကျင်း​ပ click
- ကရင့်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ (ဓာတ်ပုံ) click
- ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်ကို အီလက်ထရောနစ်​ ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲရန် အမိန့်ချ click
- GW က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး လှုံ့ဆော် click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး ကူညီဖို့ စာချိတ်ဆွဲ click
- ပဋိပက္ခအမြင်ရှောင်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အစိုးရ သဘောတူညီ click
- နှစ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ သဘောတူကြ click
- ပူး​ပေါင်း​ဆောင်ရွက်မှုက​နေ တိုး​တက်မှုရရှိလိ့​မ်မည်ဟု ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်​ပြောကြား​ click
- လေဘေးသင့် သေဆုံးပျောက်ဆုံးသည့် ရေလုပ်သားမိသားစုဝင်များကို အန်အယ်လ်ဒီ ထောက်ပံ့ click
- ဦးကျော်ဆန်း ချုံးပွဲချငို click
- ဦးကျော်ဆန်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း စိတ်ခံစားမှုကြောင့် မေးခွန်းအချို့ကို ဖြေကြားခြင်းမပြု click
- အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အစိုးရသစ် လုပ်ဆောင်နေဟုဆို click
- ကြံ့ဖွံ့အစီရင်ခံစာ ရဲစားပေါက်ဖြစ်နေဟု အများ ဝေဖန် click
- မြန်မာ့ငွေကြေးအတွက် အိုင်အမ်အက်ဖ် ကူမည် click
- တိုင်းပြည် ငွေကြေးလည်ပတ်မှုမှာ မထုတ်ပြန်သင့်သောအရာဟု ဝန်ကြီး ပြော click
- အမျိုးသမီးနဲ့ နိုင်ငံရေး (ရုပ်သံတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း) click
- ဆီးဂိမ်းနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ဂီရိမုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွင် ထမင်းငတ်နေသူများ ရှိနေပြီ click
- ပလက်ဝ ကြားခံဆိပ်ကမ်း ပွင့်လင်းရာသီတွင် အိန္ဒိယက တည်ဆောက်မည် click
- တရားမ၀င် ခရီးသွားသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ဘင်္ဂလီ ၁၅၀ ဦး ဖမ်းမိ click
- သုံးလခန့် ကြာသော်လည်း မုဒုံ ဖုန်းလိုင်း ပြတ်တောက်နေဆဲ click
- ဒုက္ခသည်ဈေးဆိုင်များ ထိုင်းအာဏာပိုင်များထံ လစဉ် အခွန်ပေးဆောင်ရ click
- တပတ်အတွင်း​ စီး​ပွား​ရေး​သတင်း​ click
- ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ တွစ်တာဆိုဒ်များ ပိတ်ပစ်ဖို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် လွှတ်တော်မှာ ပြော click
- ထပ်စင်ကို ၂ ခါ အပြစ်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ click
- အတိတ်နှင့်​လမ်း​ခွဲလိုက်ပါ – အာရပ်​နွေဦး​အတွက် အင်ဒိုနီး​ရှား​သင်ခန်း​စာ (ဘာသာပြန်​ဆောင်း​ပါး​) click